Last nohavaozina: Jan. 04 2018 | 4 min namaky
Na izany aza tianao ny hanao izany, mampiaraka dia mampidi-doza lalao. Tsy miresaka amin'olon-tsy fantatra mety ho torohevitra mba hanome ny ankizy, fa ho toy ny tetika mba tsy ho mpitovo, izany dia mazava iray, fara fahakeliny drawback. Raha tsy te-hanambady ny havanay, mahita olona mba hanorim-ponenana any amin'ny ho anjara fanaovana masony amin'ny olona tsy fantatra, anjara azy ireo amin'ny resaka sy ny fivoriana iray-on-iray.
Misy loza roa mazava eto. Ny voalohany dia hoe namana vaovao ny mety hiseho ho mpanao ody tanteraka raha ny marina, fa mety ho mangatsiaka-blooded philanderer amin'ny rakitsoratry ny fo-Mafana. Ho mihevitra na inona na inona izy ireo ny hitarika anao amin'ny, milalao lalao sy manitsakitsaka ny ny fihetseham-ponao. Izany no tsara sy ratsy ianao Leo inoana toy izany ny olona efa.
Ny loza faharoa dia ratsy aza, na dia be dia vitsy. Ny tarehy vahiny izay mihaona ao amin'ny bar tena mety ho afaka ao an-toerana voaheloka avy ao amin'ny toeram-pitsaboana. Raha noheverinay fa hahita olona izay mahatonga anao tsy hanan-tahotra ka tsy manana ahiahy ny amin'ny sisa amin'ny fiainanao, ianao izay alaina olona ny mitranga ny hametraka ny fiarovana-doza, ary mitaky anao hanalany andiana didim-pitsarana sy ny rafitra fanairana vaovao.
Na dia ny vintana fihaonana olona toa izany dia tena kely aterineto, tsy hanenenana ny fanaovana ilay ezaka mba ho malina. Ao amin'ity toko ity, isika dia handeha hiresaka momba ny fomba intso- ny vondrona faharoa ity ka mitoera soa aman-tsara an-tserasera.
Samy tsy fantatry ny ratra Fomba
Rehefa mihaona amin'ny olona eo amin'ny fisotroana, ny voalohany-up angady dia be ny fiarovana toy ny maso tahaka ny seky-avy. Raha mamantatra olona iray nipetraka irery tarehy teo amin'ny latabatra ny anao akaikin'ny, eo anatrehanao dia manome azy ireo ny fijery alohan'ny handraisana misy karazana fifandraisana mihitsy no mandinika azy ireo mandritra ny minitra vitsivitsy ny mahita ny fomba fihetsiky ny waiters, amin'ny alalan'ny tenany, na amin'ny olona izay mandalo. Raha tsy mahalala fomba izy ireo, miavonavona na tsy mahafinaritra fotsiny downright, tsy mampaninona hatraiza ny looker izy ireo, Mbola ianao handeha hijery mahitsy amin'ny. Raha ianao ry zareo antoka ara-dalàna, mandroso ny olombelona no miezaka hanao masony, hongotako ny herim-po hiatrehana fandavana sy manao ny hetsika.
Ary indray mandeha manao manao mihetsiketsika, foana ianao Mikarakara ny famantarana kely izay milaza aminareo fa ilay olona miresaka ianao dia latsaky ny ara-dalàna. Misy isan-karazany ny fanazavana mba hanampiana anao hanao izany: ny fomba olona akanjo, ny fomba sy ny vatany miresaka teny ny anarany, fa vitsy sy Hitanao izy rehetra tsy ho tsapany fa izay tadiavinao azy ireo.
A Cowboy satroka sy ny Texas drawl ohatra, hilaza aminao avy hatrany ny olona iray izay avy ary aiza izy ireo hitoetra ao amin'ny firenena fizarazarana ara-kolontsaina. Bleached volony sy ny sazy izay farany amin'ny 'dude’ hilaza aminareo mitovy. Matahotahotra twitches, tanana sy miavaka anefa no voaro Scratching milaza zavatra rehetra momba ny olona sizing ianao ka hanampy anao hanapa-kevitra momba ny raha tokony hanao daty na manao fialan-tsiny.
Face-tava, ao ve ianao iray taonina famantarana hafa izay milaza aminareo vola be momba ny olona ianao mieritreritra ny Mifampiresaka amin'ny.
Online, ao ve ianao na inona na inona mba handeha fa izay mametraka ny olona eo amin'ny mombamomba sy manoratra eo amin'ny mailaka.
“Tsy toy ny tena nisy fifandraisana izay manana hevitra ny olona izay aelin'ny, izay tena tahaka, fomba iainany, etc., an-tserasera ianao tsy misy izany,” Hoy i Lisa Hupman, za-draharaha, izay nanangana cyberdater WildXangel.com, tranonkala iray izay mampitandrina ny hafa ny amin'ny loza daters amin'ny aterineto mampiaraka. “Bebe kokoa ianao raha ny marina matoky noho noho satria tsy manan-tsafidy.”
Sy ny antony tsy manan-tsafidy ianao, na marimarina kokoa, safidy kely-mikasika ny haavon'ny matoky manome dia fitaovana lehibe indrindra izay miaro aminao amin'ny Internet dia toy izany koa fa miaro ny tsindraindray nutcase izay roams ny Web: anarana.
Tsy misy lalana ho an'ny olona roa izay hifanakalo mailaka amin'ny aterineto ny mahafantatra ny tena maha izy ny olona nanoratra ho ianao. Ny mailaka ianao mandray tany amin'ny Inbox any an-toerana.
Ny anarana fidinao no mamorona ianao ary tokony hiteraka tsy havan'i ny tena maha.
Raha mbola tsy aoka ny tena, anarana feno hitsaitsaika hivoaka eo anoloanao efa miorina iray be ny fahatokiana, ianao manomboka fifandraisana an-tserasera tanteraka ny alalan 'ireo hoe ny olona izay manoratra ho anao tsy misy hoe iza ianao, misy anao na ny fomba mety hamehy ny aminareo ivelan'ny toerana.
Rehefa mampiaraka an-tserasera, ny mampiaraka maha izay ataony ny misy ihany ilay izy amin'ny Internet. Misy ny sakana tanteraka eo ny aterineto sy tena ny tena anao sy izay sakana no fiarovana tsara indrindra amin'ny misy wacko mety ho voatifitra ampy mba hihaona an-tserasera.
Raha manana ny ratsy vintana hitsena ny loony amin'ny toerana mampiaraka, raha mbola ianao nitandrina ny maha iray zava-miafina, tsy misy fomba afaka hanelingelina anao amin'ny tena fiainana.
Mazava ho azy, izay miasa ho azy ireo koa. Satria tsy misy lalana ho anareo mba hanamarinana ny maha-izy ny olona iray mihaona amin'ny Internet, ao ve ianao tsy hoe na ny dokotera izay naniraka anareo mailaka nahazo ny mari-pahaizana na ny mari-pankasitrahana avy any Harvard, rehefa milaza, na nandidy azy avy amin'ny tranonkala ao Romania. Ao ve ianao, raha tsy hoe tena miasa izy ireo noho ny Peace Corps nandritra izay roa taona, na nandritra iny fotoana fanjairana mailbags amin'ny fonjan'i-panjakana. Ary ianao tsy nahazo hoe na ny olona izay nilaza ny tenany ho mpankafy dia hamela anao irery ihany indray mandeha milaza aminy ianao, na dia tsy liana mbola mijanonjanona eo ivelany ny varavarana fidirana miandry anao avy miasa.
Mety ho tsara ve raha nisy ny lisitra izay afaka mandeha amin 'ny alalan rehefa mahita olona an-tserasera. Raha voalaza 'antsy’ mihoatra ny in-telo ao amin'ny mailaka voalohany, dia afaka mifidy ny boaty. Raha nilaza izy ireo fa izy ireo nanompo ny herisetra maro fehezanteny heloka bevava, izay hitarika anao ny mifidy boaty hafa. Raha niresaka mikasika ny fifandraisany amin'ny Unabomber izay mamely azy.
Saingy tsy mora.
Ny fomba tsara indrindra mba tena azo antoka amin'ny aterineto dia ny manaraka ny fitsipika tsotra telo: hitandrina ny anarana raha mbola araka izay azo atao; tsarovy fa raha misy zavatra tsy mety mahatsapa, izany angamba no; ka nanapaka azy haingana sy tanteraka ianao raha vao manimbolo zavatra hafahafa.